विराटनगर, १३ असोज - सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले मन्त्रालयअन्तर्गत नगर र गाउँपालिका केन्द्र जोडिने चार हजार पाँच सय किमी सडक सञ्जाल निर्माण कार्य अगाडि बढेको बताउनुभएको छ । विराटनगर बसपार्क व्यवस्थापन समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित बडादशैँ, दीपावली तथा छठ पर्वको शुभकामना
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ‘असफल’ सावित भइसकेको बताएका छन् । ‘दशैंका मुखमा महँगी चुलिएको छ, बजारमा किनमेल गर्न सर्वसाधारणलाई गाह्रो भएको छ, व्यापारी आजित भएका छन्’ उनले भने,‘सरकारले यी
​लक्ष्य प्राप्तिका लागि सक्रिय हुन मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ, ९ असोज – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देखिने प्रकारको आर्थिक उन्नति र विकासको प्रगति ल्याउन सबै मन्त्री र सचिवहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा सक्रिय हुन निर्देशन दिनुभएको छ । चालू आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पहिलो दुई महीनाको समीक्षाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच भाइचारा सम्बन्ध स्थापित भएको छ । मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा दुई पार्टीबीच भाइचारा सम्बन्ध स्थापना गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष
के साँच्चै कम्युनिष्ट नै छौं त हामी अहिले ? अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौँ, असोज ६ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहाना प्रधान कम्युनिष्ट र राजनीतिक आन्दोलनमा अग्रणी नेता रहेका बताउनुभएको छ । पाँचौँ सहाना स्मृति दिवसका अवसरमा सहाना प्रधान प्रतिष्ठानले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले प्रधानले गरेका योगदानका धेरै
सामाजिक सञ्जालमा विना मुद्धाका विषयमा अल्झेका युवा र क्रिटिकल नहुने हुर्केको पुस्ता देख्दा चिन्ता लाग्छःप्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमा समय पास गरिरहेका केही युवा र हुर्किएका पुस्ताको आफूलाई चिन्ता लागेको बताएका छन् । उनीहरू विना मुद्धाका परिणामहीन हुने वहसमा व्यतीत भइरहेको प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी छ । संविधान दिवसका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई शुक्रबार सम्बोधन
नयाँ संघीय संसदभवनको प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा शिलान्यास
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारको पुतली बगैँचामा नयाँ संघीय संसदभवनको शिलान्यास गरेका छन् । अत्याधुनिक उक्त भवनको अनुमानित लागत पाँच अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ । १ सय ७३ रोपनी क्षेत्रमा फैलने उक्त भवनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा रहनेछन्। उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री
कांग्रेसको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा वैठक अवरुद्ध
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको छ । बाँके घटनाको विषयलाई लिएर कांग्रेसले सोमबार पनि संसद अवरुद्ध गरेपछि वैठक बस्न सकेन । सभामुख कृष्णबहादुर महराले पटक पटक आग्रह गरेपनि कांग्रेसका सांसदहरुले अवरोध जारी राखेपछि बैठक स्थगित भएको
कांग्रेसको दोस्रो चरणको जागरण अभियान प्रारम्भ
काठमाडौं, भदौ २४ : नेपाली कांग्रेसको ‘हिमाल, पहाड, तराई–मधेश नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रिय जागरण अभियान’को दोस्रो चरण आजदेखि मुलुकभर एकसाथ प्रारम्भ भएको छ। जननायक बिपी कोइरालाको १०६औँ जन्मजयन्तीको दिवस पारेर जागरण अभियान आजदेखि प्रारम्भ भई आगामी असोज ७ गते समापन हुनेछ। जागरण अभियानको दोस्रो चरणमा
काठमाडौं, १९ भदौ – कार्यबाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मुलुकले लिएको दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न नीजि क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । नेसनल विजनेश इनिसियटिभ (एनबीआई) ले विहिवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको तेस्रो रेस्पोन्सिवल जिनेस समिटको उद्घाटन गर्दै उहाँले
काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल महिला सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष स्व. मङ्गलादेवी सिंहको २३ औँ स्मृति दिवस मनाइएको छ । नेपाल महिला सङ्घ काठमाडौँ जिल्लाको आयोजनामा मंगलबार बिहान स्व सिंहको सालिक रहेको ठाउँ शोभाभगवतीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी माल्यापर्ण गरिएको हो । कार्यक्रममा काङ्ग्रेस
काङ्ग्रेसले जनताको मन जित्नेगरी काम गर्नुपर्छ : वरिष्ठ नेता पौडेल
चितवन, भदौ ९ गते । नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले काङ्ग्रेसले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्ने समय आएको बताउनुभएको छ । आज यहाँ पत्रकारसँगको कुराकानीमा उहाँले सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएकाले जनताको मन जित्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । नेता पौडेलले भन्नुभयो, “सरकारको
नेकपामा चार जना केन्द्रीय सदस्य थपिए
काठमाडौं । पहिलो पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चार जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेको छ । बैठकले देवेन्द्र पराजुली, कल्पना धमला, पदम राई र किरण राईलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । पराजुली
नगर प्रमुख र उपप्रमुखले मनोमानी गरेको भन्दै पाँच वडाध्यक्षद्वारा सामूहिक राजीनामा
बाजुरा। जिल्लाको बडिमालिका नगरपालिकाका पाँच वडाध्यक्षले सामूहिक रुपमा राजीनामा दिएका छन् । प्रचलित नीति नियम र ऐन कानून विपरीत नगरप्रमुख, उपप्रमुखले एकलौटी निर्णय गर्ने र समितिका सदस्यलाई समेत जानकारी नदिई मनोमानी गर्ने क्रम नरोकिएकाले बिहीबार एक ध्यानाकर्षणपत्रसहित पाँचै वडाध्यक्षले सामूहिक रूपमा
काठमाडौं । नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षितले भारतले कश्मिरमा चालेको कदमबारे कुरै नगर्ने अभिव्यक्ति गतल भएको बताएका छन् । मंगलबार रिपोर्टस क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दीक्षितले भारतले कश्मिरमा चालेको कदमबारे नेपालले कुरै नगर्ने भनेर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले अभिव्यक्ति
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को संसदीय निर्वाचनसम्म प्रधानमन्त्रीमा रहने अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्ट नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने बताएका छन् । प्रचण्डले आन्तरिक सम्झौता अनुसार सरकारको नेतृत्व फेरिने बताएका छन् । सोमबार जनकपुरमा
ज्यूँदै फालेको राजसंस्था उल्टाउने सपना नदेख्न प्रधानमन्त्रीको चेतावनी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजसंस्था उल्टाउने सपना कसैले नदेख्न चेतावनी दिएका छन् । उनले मृत्य राजसंस्था वकालत गर्नेहरूको सपना पूरा नहुने भन्दै ज्यूँदै फालेको राजसंस्था उल्टाउने सपना नदेख्न चेतावनी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको उदारता र सयंमतालाई हेरेर केही तत्वहरु हौसिएको टिप्पणी
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले ३३ ओटै विभाग नेतृत्व जिम्मेवारीको टुंगो लगाएको छ । शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले विभाग नेतृत्व छिनोफानो गरेको हो । लामो समयदेखि अड्किएको स्कूल विभागको जिम्मेवारी उपप्रधान एवम् एवं सचिवालय सदस्य इश्वर पोखरेलले पाएका छन् । यसअघि पटक–पटक बस्ने बैठकमा स्कूल
अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्डबीच सहमति जुटेन,बैठक फेरि स्थगित
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक आज (बुधबार) पनि स्थगित भएको छ । केही हप्तादेखि स्कुल विभाग प्रमुखमा पूर्व एमाले र माओवादी बीच सहमति नजुट्दा बैठक बस्न सकेको छैन् । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच कुराकानी नमिल्दा बुधबार दिउँसो ३ बजे बस्ने भनिएको
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आज बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक बुधबारका लागि सारिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सिङ्गापुरबाट उपचार गरेर फर्केलगतै आज बैठक बस्ने भनिए पनि तयारी नपुगेकाले सारिएको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार
काठमाडौ । स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर जानुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज स्वदेश फर्किनुभएको छ । थाइ एयरवेजको बिमानबाट आज दिउँसो साढे १२ बजे उहाँ स्वदेश फर्किनुभएको हो । विमानस्थलमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, मन्त्रीहरु, नेकपा नेता बामदेव गौतम, सुवास नेम्वाङलगायत विमानस्थलमा पुग्नुभएको
नेकपाले नैतिकताको खिल्ली उडायो,तत्काल सरकारी जग्गाबाट पार्टी कार्यालय हटाऊःकांग्रेस
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सत्ताको बलमा नेकपाले सरकारी जग्गामा निर्मित भवनमा पार्टी कार्यालय राखेको प्रति आपत्ति जनाएको छ । पार्टीले नैतिकता विपरित सरकारी जग्गामा पार्टी कार्यालय राखेकाले सो हटाउन माग गरेको छ । बिहीबार कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बिहीबार विज्ञिप्ति
साउनभित्रै पार्टी एकता काम सकिन्छः नेपाल
चितवन । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता माधवकुमार नेपालले साउन महीनाभित्र पार्टी एकता टुङ्गिने बताएका छन् । शुक्रबार पत्रकारसँगको कुराकानीमा नेता नेपालले पार्टी एकता चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गाउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । एकताको प्रक्रिया ढिलो हुँदा पार्टीमा निरासा
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा योगश भट्टराई नियुक्त
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिक्त रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा योगश भट्राईलाई नियुक्ति गरेका छन । भट्टराई ले आजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन । आज राष्ट्रपतिका कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रतिनिधिसभाका
अध्यक्ष प्रचण्ड पत्नी सीता र दुई छोरीसहित युएई प्रस्थान
काठमाडौं, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मंगलबार विहान संयुक्त अरब इमिरेट्स ‘युएई’ प्रस्थान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल, छोरी रेणु र गंगा दाहालसहित युएई प्रस्थान गर्नुभएको हो । प्रचण्ड पत्नी सीताको इच्छाअनुसार प्रचण्ड परिवारले
नेवि संघ भन्छः निर्मलाले न्याय कहिले पाउँछिन् सरकार ?
काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघले निर्मलालाई न्याय भन्दै राजधानीको माइतीघर मण्डेलामा प्रर्दशन गरेको छ । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको गत बर्ष साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । एक बर्ष सम्म पनि सरकारले दोषी पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै नेवि संघले शुक्रबार नेवि संघले प्रर्दशन गरेको हो । निर्मलाले न्याय
तत्काल पाँच सय कर्मचारी नदिएकाम गर्न सकिँदैन्ःमुख्यमन्त्री शाही
काठमाडौं ७, साउन । कर्णालीप्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले केन्द्र सरकारले तत्काल पाँच सय कर्मचारी नदिए काम गर्न नसक्ने बताएका छन् । कर्मचारी अभावले काम गर्न नसकिएको भन्दै विना कुनै ढिलासुस्ती केन्द्रले कर्मचारी दिनुपर्ने बताए । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा
अभिषेक सापकोटा/काठमाडौं, नेपाल कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरित चलेको बताएका छन् । उनले मिडिया विधेयक, मानवअधिकार विरुद्धको विद्येयक ल्याएर सरकारले लोकतान्त्रिक मान्यताविपरित काम गरेको आरोप लगाए । ३८ औं विपी स्मृति दिवसका अवसरमा विपी संग्राहलयले आयोजना
काठमाडौं । विपी कोइरालाको ३७ औं स्मृति दिवस आज ( सोमबार) विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै । २०१५ सालमा मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नु भएको कोइराला नेपाली कांग्रेसको संस्थापक मध्ये एक हुन् । विपी स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाली कांग्रेस, कांग्रेस, भ्रातृ संस्था, र विपी सङ्ग्रहालय समितिले
नेकपाले तोक्यो ७७ जिल्ला र ६ महानगरपालिका इन्चार्ज र सह–इन्चार्ज (नामावलीसहित)
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले ७७ जिल्ला र ६ महानगरपालिकाको इन्चार्ज र सह–इन्चार्जको नाम टुंगो लगाएको छ। आइतबार पार्टी एकता प्रक्रिया टुङ्याउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा केन्द्रीय सचिवालय बैठकले ७७ भौगोलिक जिल्ला र ६ ओटा महानगरपालिकाको समितिको इन्चार्ज र सह इन्चार्ज